My twin lay.. ပြန်လာမှ လုပ်ကျွေးမယ်..
မ၀တ်ရည်ရေ..တခုလောက်မေးချင်လို့ပါ ..ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲမှာ ကော်ရည်တွေက အေးရင် ကျဲသွားတတ်တယ် .. အဲ့ဒါကို အပူပြန်ပေးရင်လည်း မပျစ်တော့ဘူး ပူတာပဲရှိတော့တယ်..အဲ့ဒါ အေးသွားတဲ့ ကော်ရည်ကို ဘယ်လို ပျစ်အောင်လုပ်ရမလဲ အမ ဆီမှာ နည်းလေးရှိရင် သိပါရစေ..
ဟုတ်တယ်။ ညီမ။ အေးသွားရင် ကော်ရည်က ကျဲသွားရော။ ပျစ်အောင် ကော်မှုန့်ကိုရေနဲ့ ဖျော်ပြီ ဆူနေချိန် ထပ်ထည့်ပေးရပါတယ်.. ကျေးဇူးနော်
Thanks u too sis:D
good.i try ဘဲသား ကော်ရည်
Plz try it.. 🙂
ဘဲသားက အကောင် အကြီးကြီးတွေဘဲ ၀ယ်လို့ရလို့ ၀က်နံရိုးနဲ့ ချက်စားတာ .. အဲဒါလည်းစားကောင်းတယ်
Dear Ma Wut Yee,
Why are you very smart in cooking? I just find your website. I like your cooking. I also can cook many dishes. But now I have to learn your dishes from you. I am very interested in cooking many dishes with many styles for my family. And also I am very interested in decoration for preparing plates with very stylishly. I do not like no taste dishes and no stylish. But sometime I am very lazy to cook and prepare dishes. So we want go out and eat outside. Anyhow many thanks.
Thanks also par naw.. နောက်လည်း လာအားပေးပါအုန်း… 🙂
ညီမရေ၊ ငပိအစားဘာထည့်လို့ရမလဲ။ အရမ်းလုပ်စားချင်ပေမဲ့ ငပိမစားတော့အခက်တွေ့နေတယ်။ ကျန်တာအားလုံးထည့်ပြီး ငပိမထည့်ရင်ရောအရသာကောင်းဦးပါ့မလား။း)
ငပိ မပါလည်း၊ ဒီအတိုင်း ဘဲသားကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ စားလို့ကောင်းပါတယ် အစ်မ.. 🙂
ကြက်သားမျှစ်ကြော်ဟင်းလေး http://www.wutyeefoodhouse.com/?p=1587 လည်း ချက်လို့ရပါတယ်။ ကြက်ကချင်ချက်လည်း ချက်လည်းရတယ်။ sorry for late reply!
ကျေးဇူးမဝတ်ရည် ဒီတပတ် Sunday
တော့ကော်ရည်ချက်ပြီ အရမ်းစားချင်လာလို့ :p
လုပ်စားကြည့်နော် sis.. အ၇မ်းစားကောင်းတယ်.. 🙂
ကော် ရည် ခေါက် ဆွဲ အားပေးသွား ပါ သည်။ မန္တလေးမြီးရှည် မှာထည့် တဲ့ ကော်ရည် လုပ် နည်း နဲ့ ဂျုံ လုံးကြော် နည်း share ပေးလို့ရ မလား ရှင်။ Thank you so much.
ဟုတ်ကဲ့။ နောက်ပိုင်း ကြိုးစားတင်ပေးပါ့မယ်..
wyityi win says:
Plz let me share this web , i interest in cooking
May Yeelin says:
I would like to know some of the ingredient in English. what is recipe called in English? I live in New York but can’t seem to find in any restaurant since I don’t know the name. Please translate the following in English.
ပဲလိပ် = dried soya bean sheet
ပန်းခြောက် = pann gyauk/rose of Jericho
ကြက်သားမှုန့် = chicken powder
တရုတ်မဆလာ = Chinese five spices powder
Is thereaname for the title of this recipe other than called Duck Noodle soup?
I have this recipe ဘဲကင် နှင့် တရုတ်စတိုင် ခေါက်ဆွဲပြုတ် :http://www.wutyeefoodhouse.com/?p=5007/
thanks so much , wutyee…
So welcome sis ..
ခဏခဏတော့ ချက်စားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝက်သားနဲ့။
စုံစုံလင်လင်နဲ့ တခါလောက် ချက်ကြည့် လိုက်ပါမယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ချက်စားကြည့်ပါနော်။ အရမ်းစားကောင်းပါတယ်.. 🙂
Aye Sandar Mtint says:
ကျေးဇူးပါ sis.. 🙂
swe mar says:
ထိုင်းအစားအစာ ကွေ့သရို လုပ်နည်း သိချင်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ်…